Ajụjụ ọnụ nke ọdụ ụgbọ mmiri Berna González: akwụkwọ akụkọ mpụ kacha ewu ewu. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ajụjụ ọnụ nke Berna González Harbor, onye edemede nke akwụkwọ akụkọ mpụ nke María Ruiz na-elekọta ya.
Ọdụ mmiri Berna González: Onye edemede nke usoro ojii nke onye nlekọta María Ruiz na-eme.
Anyị nwere ihe ùgwù na obi ụtọ nke ịnwe taa na blọọgụ anyị Ọdụ ụgbọ mmiri Berna González (Santander, 1965): onye edemede, odeakụkọ na onye na-enyocha ọha mmadụ nke oge a n'akụkụ ya niile. Ejikọtara ọrụ ya dị ka onye nta akụkọ El País ebe o jigoro ọkwá dị elu dịka onye nchịkọta akụkọ nke Babelia, osote onye isi akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ onye nnọchi anya pụrụ iche na mba ndị esemokwu n'etiti ndị ọzọ.
Ọdụ Gongbọ Mmiri González abanyela n'ọnụ ụzọ buru ibu na akwụkwọ mpụ na ya Usoro uwe ojii nke onye ọrụ María Ruiz ji.
Akwụkwọ akụkọ: arrive rutere na akwụkwọ akụkọ ahụ na 2010, yana ọrụ na-aga nke ọma ma na-ewusi ike dịka onye nta akụkọ na onye njikwa na otu n'ime akụkọ akụkọ Spanish: El País. Kedu ihe ọ kpọrọ gị banyere akwụkwọ, gbasara akwụkwọ mpụ?
Ọdụ ụgbọ mmiri Berna González:
Akwụkwọ m kpọrọ m ogologo oge tupu nta akụkọ, ebe m bụ nwata. Ma, amaliteghị m akwụkwọ n’afọ ruo 2010, mgbe ọ dị m ka m jikere. Akwụkwọ mpụ ahụ bụ ngwa ọrụ zuru oke maka igwu ala n'ime oghere nke eziokwu.
AL: You na-amalite njem edemede site n'aka onye ị ga-agụ, onye uwe ojii María Ruiz. Mgbe okpukpu abụọ gasịrị, mgbe ndị na-agụ akwụkwọ na-arịọrịrị maka onye nlekọta ọzọ Ruiz, ha na-amalite ịmalite ọrụ ọhụrụ na-enweghị ya, na nke ikpeazụ a, Anya mmiri nke Claire Jones, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ikpe gị ọzọ. Ogologo ndụ Commissioner Ruiz?
BGH: Enwere m olileanya, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ọ bụrụhaala na ndị na-agụ akwụkwọ sonyere m. Ọ gbagwojuru anya karịa ọrụ ndị nwere onwe ha, n'ihi na ịkwado usoro nke ndụ ndị protagonists ga-edebe ọ bụghị naanị mmekọrịta dị n'ime akwụkwọ ahụ, kama ọ ga-adị ogologo oge dị mkpa nke dị mgbagwoju anya karị, mana m na-atụ egwu na m ga-alarịrị. Agaghị m egbu Ruiz.
AL: Onye protagonist gị nọọrọ onwe ya, nwee ọgụgụ isi, nwee ihe ịga nke ọma, enweghị mmasị, onye naanị ya, onye ọkà mmụta akparamàgwà mmadụ, onye na-eme egwuregwu, enweghị nwa, otu, nwanyị, onye ọrụ oge niile, gosipụtara ma na-eguzosi ike n'ihe. Kedu ihe na-enye Berna nye Maria na Maria nye Berna?
BGH: Oge ọ bụla anyị nyere ibe anyị karịa, n’agbanyeghi na ịgụta agwa iri na atọ ikwuru, echere m na anyị na-ekekọrịta naanị asatọ ma dị iche na 13. Ma, Ruiz na m, dị ka ọtụtụ ụmụ nwanyị ugbu a, enyefela ọtụtụ ihe iji mezuo n’enweghị oge.
AL: Ahụmịhe gị nke eziokwu dị iche iche, siri ike mgbe ị gachara ọrụ dị ka onye nta akụkọ akụkọ, na-abụ akụkụ nke oge dị ukwuu n'akụkọ ihe mere eme nke narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX. Kedu eziokwu dị adị n'akwụkwọ akụkọ gị? Ego ole bụ akụkọ edemede na ego ole bụ akụkọ akụkọ akụkọ na-emegharị ihe oyiyi nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'oge a?
BGH: Ihe niile bụ akụkọ ifo, mana na-adaberekarị n'okwu ndị na-akpali m, nke na-ahapụ m gbagwoju anya n'eziokwu. Site na mkparị nke pedophilia ruo na ndị na-egbu onwe ha na France Telecom ma ọ bụ mkpokọta na mkpokọta n'ike n'ike na wasap, ihe niile nwere ụkwụ na ihe m na-aghọtaghị banyere eziokwu. Ide ede bu uzo anwa-anwa ighota.
AL: Oge nke mgbanwe maka ụmụ nwanyị, n'ikpeazụ feminism bụ okwu maka ọtụtụ ma ọ bụghị naanị maka obere ụmụ nwanyị ole na ole ụmụ nwanyị mejọrọ maka ya. Gị onwe gị, site n'ọkwa gị, jiri igwe okwu na-ekwu okwu n'aka na-agbachitere ịha nha anya, kedụ ozi gị nye ọha mmadụ gbasara ọrụ ụmụ nwanyị na ọrụ anyị na-arụ ugbu a?
BGH: Naanị ihe m chọrọ bụ na, n'ime mkpebi ọ bụla ha mere, ndị nwoke na ndị nwanyị nwere ikike ọ bụla na-ajụ onwe ha ma ọ bụrụ na ha na-anọchite anya ọha mmadụ. Foto nke ike adabaghị na foto nke eziokwu.
Anya mmiri nke Claire Jones: Nkeji ikpeazụ nke onye na-elekọta ụlọ María Ruiz.
AL: Akwụkwọ ọhụrụ gị, Anya mmiri nke Claire Jones, E bipụtara afọ gara aga, na 2017, enwere ugbua ọrụ ọzọ? You bụ otu n'ime ndị na-amalite akwụkwọ na-esote ozugbo nke gara aga kwụsịrị, ma ọ bụ na ịchọrọ oge imepụta ihe okike?
BGH: Oge ọ bụla dị iche. Anya mmiri ... ọ na-efu m karịa n'ihi na n'etiti m edere nke dị iche na m kwagara ebe dị anya. Mana na nke a amalitere m ozugbo, enweela m María Ruiz na ihe odide niile na ọnọdụ m n'isi ọzọ, yabụ ahụ m gwara m. Echere m na ọ ga-adị nnọọ ike.
OZU: Ohi akwukwo ndi ozo: ikpo okwu maka ndi edemede ohuru iji mee onwe ha ka ha mara ma obu mebie mmebi nke mmeputa akwukwo?
BGH: Ọ bụghị mmebi nke mmepụta, nke ga-aga n'ihu site na oke na mkpa, mana na akpa anyị. Ọ bụ ohi nro. Agaghị m enwe obere mpempe maka ikpe akwụkwọ mpụ!
AL: N'agbanyeghị ọdịdị ọdịnala nke onye edemede edepụtara, gbachiri ma na-enweghị mkparịta ụka mmekọrịta, enwere ọgbọ ọhụụ nke ndị edemede na-ede kwa ụbọchị, ndị netwọkụ mmekọrịta ha na windo nkwukọrịta ha na ụwa. Kedu ka mmekọrịta gị na netwọkụ mmekọrịta dị? Kedu ihe na-ebuwanye ibu n'ọdụ ụgbọ mmiri Berna González, ọdịdị ya dị ka onye nta akụkọ nke mepere ụwa ma ọ bụ nke onye edemede na-enwe anyaụfụ n'ihi nzuzo ya
BGH: Ọ bụ mmekọrịta nke m nwere oke njọ, na-enye m nsogbu mgbe niile. Ọ na-esiri m ike ijikọta gorilla abụọ m ebe ahụ karịa ndụ n'ezie. Mana echere m na onye nkwukọrịta narị afọ nke XNUMX - site n'aka onye edemede ma ọ bụ odeakụkọ - enweghị ike ịnọ.
AL: Akwụkwọ ma ọ bụ usoro dijitalụ?
BGH: Agụrụ m n'ụdị niile.
AL: Kedu ka Berna si arụ ọrụ nke onye na-agụ ihe? Kedụ akwụkwọ ndị dị n'ọ́bá akwụkwọ gị nke ị na-agụgharị kwa afọ ole na ole ma na-abịaghachi mgbe nile ịnụ ụtọ dị ka oge mbụ? Ọdee ọ bụla masịrị gị, ụdị ị zụrụ naanị ndị e bipụtara?
BGH: Chineke m, ịgụ ezigbo akwụkwọ bụ ihe riri ahụ nke yiri nke ịnwale ide ya. Ọ na-atọ m ụtọ ịchọta ndị edemede ọhụụ, ọkachasị site na Latin America, na-enwe ọhyụ ọhụụ, usoro okwu, esemokwu, olu. Ha na-ama jijiji n'ụzọ nke agụta. Ugbu a Ndị Uruguayan nke Mairal, Oge ajọ ifufe nke Fernanda Melchor, Efu tọhapụrụ site na Verónica Gerber mgbe anyị nwere ozi ahụ. Na-eche na m nwere Akụkụ a na-amaghị ama site na Nona Fernández mgbe anyị nwere ozi ahụ. Banyere ndị edemede kachasị elu, ọ ga-ebi na ogwe aka Melville, Borges, Proust na Nooteboom.
AL: N'ikpeazụ, ana m arịọ gị ka ị nye ndị na-agụ akwụkwọ ntakịrị ntakịrị nke onwe gị: Gịnị bụ oge pụrụ iche nke ọrụ ọrụ gị? Ndị nke ị ga-agwa ụmụ ụmụ gị.
BGH: Ihe ndị ahụ bụ maka m, ndo. M na-agbalị ịgwa ụmụ m banyere ihe ọmụmụ ha, ndị enyi ha, ihe ha na obere ihe, dị ka ndị ọzọ, nke bụ n'ezie ihe kachasị ukwuu. Ihe omumu anyi di otutu. Ọ bụrụ na otu ụbọchị, enwere m ụmụ ụmụ, m ga-agba mbọ mata ihe ha nwere n'ime.
Daalụ, Berna González Harbor, Achọrọ m ka ị gaa n'ihu na-achịkọta ihe ịga nke ọma na nsogbu ọ bụla ị na-arụ yana na ị na-aga n'ihu na-enye anyị ọtụtụ akwụkwọ ọgụgụ dị egwu na isiokwu dị ukwuu iji tụgharịa uche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Black akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ nke Berna González Harbor, onye edemede nke akwụkwọ akụkọ mpụ nke María Ruiz na-elekọta ya.
Akụkọ kachasị mma na akụkọ ntolite
Pobọchị Powa. 6 poems usọrọ.